Magreba - Wikipedia
Ny faritanin'i Magreba (manga)
Tanger, hita avy eo amin'ny lakandranon'i Gibraltar
Ny morontsiraka Marokana tazanina avy eo Espaina
i Magreba dia faritra any Afrika Avaratra eo anelanelan'ny ranomasina Mediteranea, ny Sahara ary ny ranomasimbe Atlantika. Amin'ny teny arabo izy dia atao hoe al-Maghrib, fa amin'ny teny berbera dia Tamazgha.
Ny mpanjanatany arabo voalohany tonga teo amin'io faritra io dia nanonona azy io hoe Jazirat al-Maghrib. Ankehitriny i Magreba dia mamondrona an'i Tonizia sy i Aljeria ary i Marôka. Ankehitriny, mba tsy hifangaro dia lazaina hoe "Magreba kely" na "Magreba Afovoany" ny firenena telo maka ny saikanosy atlasianina any Afrika Avaratra. Ao amin'ny "Magreba Lehibe" dia misy an'i Maoritania sy i Sahara Andrefana ary i Libia.
Ny velarantanin'i Magreba dia 5 tapitrisa km2 voazara eo anelanelan'ny lemaka Mediteraneanina sy ny faritr'i Sahara. Ny tanimatin'i Sahara dia maka ny ankabeazan'ny Magreba. Ny isa-mponina ao Magreba dia misy 73 tapitrisa, eo amin'ny morontsiraka, be latsakorana kokoa, ny ankabeazan'ireo 73 tapitrisa ireo. Betsaka ny harena an-kibon'ny tany toy ny fôsfaty sy vy ary ny akoran'angovo (etona sy solitany).
I Magreba, mandritry ny arivo taona mahery dia vondrona ara-jeôgrafia fa tsy ara-piteny (betsaka ny fiteny ao: ny fiteny arabo sy ny fiteny berbera). Samihafa amin'ny sisan'ny tontolo arabo sy afrikanina izy noho ny fahasamihafan'ny fiavian'ny mponiny, ary noho izany ny kolontsainy. Na dia mifanalavitra aza i Magreba sy i Machrek, ny teny arabo sy ny maha Silamo no mamatotra ireo tontolo roa ireo. Ny tantarany ankehitriny dia voakasiky ny fanjanahantany frantsay sy espaniola ary italianina. Ny kolontsain'i Eorôpa Andrefana koa dia naninteraka eo amin'i Magreba, ary mbola betsaka noho ny fianjadian'i Eoropa any atsinanan'i Mediteranea ny fianjadiany eo Magreba.
Fizaram-paritra ao Afrika:
Afrika Atsimo (faritra)
Afrika atsimon'i Sahara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Magreba&oldid=993891"
Voaova farany tamin'ny 6 Jolay 2020 amin'ny 13:38 ity pejy ity.